कति मास्को मा विमानस्थलको, तिनीहरूले भनिन्छ?
मास्को - को को एक दुनिया मा शहर। हरेक दिन मान्छे धेरै रूस राजधानी आउँछन्। मास्को मा विमानस्थलको त्यसैले कति? Domodedovo, Vnukovo र Sheremetyevo: सबैभन्दा ठूलो माग तीन प्रमुख विमानस्थल लागि हो। तर पनि त्यहाँ कम लोकप्रिय छन्।
कति मास्को मा विमानस्थलको? तिनीहरूलाई एक धेरै। भाग राजधानी सीधा बुझाउँछ, र अन्य - को मास्को क्षेत्रमा। एक पनि युरोपेली स्तर मा प्रमुख विमानस्थलको को - Sheremetyevo। यो शहर को केन्द्र मात्र 29,7 km स्थित छ। निकटतम टाउन - को frontal र Khimki।
Sheremetyevo विमानस्थल - देश मा मुख्य एक र यात्रु लागि छ टर्मिनलहरु हुन्छन्:
एक - व्यापार;
बी - धेरै पुरानो disassembled टर्मिनल, नयाँ यसको ठाउँमा निर्मित;
सी - यो योजना मा reconstructed - एक सेट सिर्जना गर्न उहाँलाई सामेल;
डी - घरेलू र अन्तर्राष्ट्रीय उडानहरू लागि डिजाइन गरिएको छ;
ई - SkyTearm र "Aeroflot" सबै उडानहरू समावेश कम्पनीहरु गुजर;
फा - यो कम्पनीको शाही उडान लागि हो।
सूचीमा पछिल्लो तीन टर्मिनलहरु को UCC गठन। यो "Aeroexpress" स्टेशन को एक सेट छ। तिनीहरू सबै तीन टर्मिनलहरु मा खुला सार्न सक्षम छन् रूपमा, यात्रु लागि धेरै सुविधाजनक छ। त्यहाँ एक misconception छ रूपमा Sheremetyevo हवाई अड्डा, "1" र "2" मा विभाजित छैन। यो एकल जटिल, बस दुई टर्मिनलहरु संयोजन।
मास्को मा कसरी Domodedovo विमानस्थल? मिति उहाँले मात्र छ। र केवल Domodedovo मा एक साथ takeoffs र landings गर्न सकिन्छ। विमानस्थलमा भएको मास्को रिङ रोड देखि 22 किलोमिटर र मास्को देखि 45 कि स्थित छ। Domodedovo दुई लामो समानान्तर प्रत्येक अन्य रनवे।
यस द्वीप मा - विमानस्थलमा एक विशेष दर्ता प्रणाली संचालित। आफ्नो टर्मिनल सात। 20 र सामान लागि4- तिनीहरूलाई चार 22 खण्डहरू, तीन छ। Domodedovo मात्र यात्री टर्मिनल छ।
कति मा विमानस्थलको Vnukovo मास्को? यो छ पनि सबै भन्दा ठूलो विमानस्थलको को एक, र सबै अवस्थित को पुरानो। Vnukovo मास्को देखि 10 किलोमिटर स्थित। विमानस्थलमा तीन हावा टर्मिनलहरु, भनिन्छ जो "1", "2" र "3" को एक जटिल छ।
Vnukovo-1 तीन टर्मिनलहरु ए, बी र डी अन्तिम दुई एक पैदल बाटो बीच जडित comprises। पहिलो टर्मिनल अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलू उडान गर्दछ। टर्मिनलमा 2016 काम गर्दैन र उसलाई मार्फत छन् सबै उडानहरू, ए टर्मिनल डी मात्र केही रूसी क्षेत्रहरु को यात्रु को निरीक्षण लागि निमित्त अनुवाद।
Vnukovo-2 मात्र hops, वरिष्ठ व्यवस्थापन र वरिष्ठ रूसी विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई राष्ट्रपति लागि प्रयोग गरिन्छ। को Vnukovo-3 मार्फत प्राप्त र मास्को सरकार, व्यापार र उड्डयन, "Roscosmos" को उडानहरू पठाइएका छन्।
अन्य मास्को विमानस्थलको
गरेको मास्को मा कति विमानस्थलको र आफ्नो नाम मा एक नजिक हेरौं। अलग तीन मुख्य माथि सूचीबद्ध देखि, त्यहाँ कम ज्ञात छ। उदाहरणका लागि, Zhukovski मा disposed Ramenskoye एयरफील्ड। तसर्थ, विमानस्थल डबल नाम पाए। Zhukovsky, Ramenskoye रूसी राजधानी देखि 36 किलोमिटर स्थित। विमानस्थलमा बनाउन उडानहरू र मो सहित केही यात्री उडानहरू लागि प्रयोग गरिन्छ। टर्मिनल एक टर्मिनल छ।
कति मास्को मा विमानस्थलको? अर्को एकदम चिरपरिचित - यो साँढेको। यो Zhukovsky को शहर नजिकै स्थित छ। को एयरफील्ड यात्री उडानहरू पूरा गर्दैन, तर हेलिकप्टर मिया को अवतरण लागि प्रयोग।
Ostafyevo 1934 मा बनाइएको थियो। यो दक्षिण Butovo नजिकै छ। को एयरफील्ड को NKVD लागि डिजाइन गरिएको थियो। सोभियत समयमा, यो सैन्य द्वारा प्रयोग भएको थियो। 2000 देखि , पुनर्निर्माण पछि, र अब यसलाई एक नागरिक यात्री उडानहरू लिन्छ भएको छ। एयरफील्ड एक टर्मिनल छ।
कति मास्को मा विमानस्थलको? तिनीहरूलाई को - Chkalovsky, 1930 मा निर्माण गरे। यो Shchelkovo शहर नजिकै, मास्को देखि 31 किलोमिटर स्थित छ। एयरफील्ड प्राप्त AN-124, तू-154 र आईएल-62। Chkalovsky सैन्य लागि डिजाइन। क्षणमा, विमानस्थलमा एक विशेष उद्देश्य विभाजन गर्दछ।
Ramenskoye जिल्ला स्थित Myachkovo। विमानस्थलमा भएको मास्को रिङ रोड देखि 16 किलोमिटर र गाउँमा देखि 1 किमी माथिल्लो छ। Myachkovo। को एयरफील्ड 2009 सम्म एक नागरिक थियो। त्यसपछि खेल को स्थिति प्राप्त। अब यसलाई सानो सरकार विमानहरु र हेलिकप्टर लागि एक अवतरण प्याड रूपमा प्रयोग गरिन्छ। इलाका मा त्यहाँ दुई Myachkovo उडान क्लब छन्। तिनीहरूले विमान र इन्धन भर्ने को मर्मतका गरे। एयरपोर्ट र मा पाइलटहरूले को एक चिकित्सा परीक्षा आयोजित।
लामो उडान बेला एक हवाइजहाज मा के गर्न
दुबई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा। दुबई मा कति विमानस्थलको
कति प्रत्यक्ष तोते? जब एक पाल्तु जनावर छनौट यो एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो
पेन्सन "Cassandra" Annunciation
तपाईं छाला क्यान्सर सामना गर्नेछ कि जान्न चाहनुहुन्छ? उनको हात मा Moles गणना
एक खरबुजा कसरी चयन गर्ने? सुझाव र राज
बीमा र बीमा जोखिम को वस्तुहरु
एक ब्रश गर्न "Photoshop", घर सहित कसरी थप्न
कुंभ-महिला - Scorpio मानिस: ड्राइभिङ हावा